IMO messenger ကို app ကိုဗီဒီယိုက | android ဖုန်းများအတွက်ထိပ်တန်းထစ်စာပို့ခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » tutorials » IMO messenger ကို app ကိုဗီဒီယိုက | android ဖုန်းများအတွက်ထိပ်တန်းထစ်စာပို့ခြင်း
IMO messenger ကို app ကိုဗီဒီယိုက
android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်များအတွက် messaging app မြင်ကွင်းတစ်ခုသို့ရယူခြင်းသို့သော် IMO messenger ကို app ကို WhatsApp, WeChat နှင့်ပိုပြီးလူကြိုက်များမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းမှအသုံးပြုသူများကိုဖမ်းဆုပ်အဲဒီမှာအထဲက apps, အောင်မြင်မှုမြင့်မားသောငွေပမာဏနှင့်အတူဤကဏ္ဍကြီးယောက်ျားတွေနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်သည်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။
High-end encryption ကိုနှင့်အတူလုံခြုံအားလုံး data ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်သူတို့ဟာ android အသုံးပြုသူများအင်္ဂါရပ်များမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုပူဇော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ app ဒါရေပန်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုအကြောင်းပြချက်သည်နောက်ကျသည်။
အထက် IMO messenger ကို app ကိုဗီဒီယိုကဒီ app ကိုသင်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သင်တို့ရှိသမျှသည်အေးမြ features တွေပြသပြီးပိုအသေးစိတ်ကိုသွားဘို့ပါလိမ့်မယ် IMO messenger ကို app ကိုပြန်လည်သုံးသပ် AppsApk ပြန်လည်သုံးသပ်အပိုင်းပေါ်မှာ။
မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအခမဲ့အဘို့, နေပါစေသူတို့ကအပေါ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ device ကို!
အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို - IMO messenger ကို app ကို
IMO အတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအခမဲ့နှင့်တည်ငြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ပြည်ပမှာသို့မဟုတ်မဖြစ်ကြနေပါစေ, ကအမြဲသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
IM (မက်ဆေ့ခ်ျကို, စာသား, စကားရပ်)
ပုံပြင်ကိုသင်ရုပ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်စာသားအားဖြင့်အဆင့်အတန်းကိုဝေမျှဖို့အတှကျအကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင်၏အသက်တာဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်တွေရှောက်သွားနိုင်စွမ်း - IMO messenger ကို app ကို
ဖိုင်တွေပေးပို့ခြင်း IMO အတွက်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာပါပဲ။ သငျသညျန့်အသတ်မရှိဘဲဂီတ, ဗီဒီယို, pdf နှင့်စသည်တို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်အဘို့မဆိုအရွယ်အစားကန့်သတ်ရှိပါသလား? 10G ထက် yeah အိုးမပို
IMO messenger ကို app ကို -Big Group မှ
Big အုပ်စုတစ်စု 100k လူတွေမှတက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, မိတ်ဆွေများ, မိသားစုနှင့်အတူတူပင်အကျိုးစီးပွားပင်လူတွေနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကို chat နှင့်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ သင်ဤအုပ်စုတွင်အထူး alias ကိုရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ app အားလုံးကိုသင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစာဝှက်ပေးတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ privacy ကိုသေချာလိမ့်မယ်
အုပ်စုချတ် features တွေ။
IMO instant messenger မက်ဆေ့ခ်ျပို့ apps များ သင်ခန်းစာ ဗီဒီယိုများ